नेपालमा कोभिड-१९ का सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या बढे मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुने चिन्ता « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नेपालमा कोभिड-१९ का सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या बढे मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुने चिन्ता
२०७७, ९ भाद्र मंगलवार १२:३४ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । नेपालमा केही सातायता कोभिड-१९ भएर गम्भीर लक्षण देखिएका र सिकिस्त बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि मेडिकल अक्सिजनको अभाव हुनसक्ने चिन्ता देखिएको छ। कतिपय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू घरमै आइसोलेशनमा रहेकाले समयमै मेडिकल अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेको भन्ने विवरणहरू पनि आइरहेका छन्।
तर सरकारी अधिकारीहरू र नेपालका मेडिकल अक्सिजन उत्पादकहरूले अहिलेको अवस्थामा “अक्सिजनको अभाव नभइहाल्ने” दाबी गरेका छन्। उनीहरूका भनाइमा नेपालका “कतिपय अस्पतालहरूमा त्यही अक्सिजन उत्पादन हुने प्लान्टहरू रहेको” तथा त्यस्तो सुविधा नभएका अस्पतालका लागि पनि “पर्याप्त सिलिन्डर उत्पादन” भइरहेको छ।
सोमवारसम्म ४,५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित घरमै आइशोलेशनमा र ९,१०० भन्दा बढी सङ्क्रमित संस्थागत आइशोलेशनमा चिकित्सकीय निगरानीमा भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालमा अक्सिजनको अभाव हुने अवस्था छैन। “अहिलेको जस्तो अवस्थामा अक्सिजनले पुग्ने नै देखिन्छ… अहिलेको हकमा सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभए पनि सिलिन्डरहरूबाट अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको छ,” उनले भने।
सास फेर्न समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढे समस्या पर्न सक्ने भएकाले मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पहिले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए। नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भित्रिएपछि कतिपय अस्पतालहरूले अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
कसरी गरिन्छ अक्सिजन व्यवस्थापन?
अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा तीन किसिमले अक्सिजनको व्यवस्था हुने गरेको छ।
ठूला अस्पतालहरूले अक्सिजन प्लान्ट बनाएर पाइपबाट बिरामीको शय्यासम्म अक्सिजन आपूर्ति गर्छन्। त्यस्तै कन्सन्ट्रेटर नामक उपकरण प्रयोग गरेर हावाबाट अक्सिजन सङ्कलन गर्दै त्यसलाई प्रशोधन गरेर चिकित्सकीय प्रयोजनको अक्सिजन बनाउने गरिन्छ। अर्को तरिकामा उद्योगहरूले उत्पादन गरेको अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भरेर अस्पताललाई उपलब्ध गराइन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका ४५ वटा भन्दा बढी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्। तर कन्सन्ट्रेटरबाट अक्सिजन बनाउने कुरामा धेरै भर पर्नु नहुने कतिपय चिकित्सकले बताउने गरेका छन्।
किन आवश्यक हुन्छ मेडिकल अक्सिजन?
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा पनि करिब २० प्रतिशत बिरामीलाई कुनै पनि बेला अक्सिजन दिनुपर्ने हुनसक्ने देखिएको केही चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले भने, “लक्षण देखिएका २० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशनतलाई अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्छ र पाँच प्रतिशतलाई चाहिँ आईसीयू र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने हुनसक्छ।”
“त्यस हिसाबले भन्दा अक्सिजन चाहिँ कोभिड-१९ का बिरामीलाई अत्यावश्यक नै हुन्छ।” उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा कतिपय सङ्क्रमितले अस्पतालमा बेड नै नपाउने वा चाहिएको बेलामा अक्सिजन नै नपाउने हुने देखिएको छ।
अक्सिजन अभाव हुने भन्दा पनि घरमै आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितहरूले चाहिएको बेला अक्सिजन नपाउन सक्ने चुनौती देखिएको उनले बताए।
चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा अक्सिजनको अभाव नै नभए पनि अक्सिजन दिएर बिरामीलाई राख्न अस्पतालमा शय्या नपाइने तथा अक्सिजन दिन मिल्ने उपकरणलगायत अन्य सामग्री अभाव हुने देखिएको छ। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
के भन्छन् उद्योगीहरू?
नेपालमा मेडिकल अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको बताए। उनीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले कम्तीमा पनि १६ वटा वटा उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन्। सबैजसो उद्योगहरू ४० देखि ४५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेकाले अक्सिजनको अभाव नहुने उनीहरूको दाबी छ।
हाल निष्क्रिय रहेको नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष समेत रहेका अक्सिजन उत्पादक शिवप्रसाद घिमिरेले भने, “मेडिकल अक्सिजन अभावकै कारण कुनै पनि नेपालीले दु:ख पाउनुपर्ने अवस्था छैन किनकि यसको कच्चा पदार्थ भनेको हामीसँगै भएको हावा र पानी मात्र हो।” “आवश्यक पर्दा अहिले आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका उद्योगहरूले पूरा क्षमतामा चलाउनेबित्तिकै धेरै उत्पादन भइहाल्छ।”
तर धेरै बिरामीले आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा भर्ना हुन नपाउँदा वा अक्सिजन दिने संरचना नभएका स्थलमा उपचार गराउनुपर्दा समस्या हुनसक्ने उनको धारणा छ। उनले भने, “अक्सिजन उत्पादनका हिसाबले समस्या छैन, अन्य पूर्वाधार र संरचनाका कारणले बिरामीले अक्सिजन नपाउने चाहिँ हुनसक्ला।”
कसलाई चाहिन्छ अक्सिजन?
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर गम्भीर लक्षण देखिएका बिरामीमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिन्छ। तिनलाई सघन उपचार र अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमवार अपराह्णसम्म १५३ जना बिरामी सघन उपचार कक्षमा छन्। तीमध्ये वाग्मती प्रदेशमा १५ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
भेन्टिलेटरका राखिएका बिरामीलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास गराइन्छ अर्थात् अक्सिजन दिइन्छ भने अरू बिरामीलाई पनि जुनसुकै बेला अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसबाहेक लक्षण देखिएका कतिपय अन्य बिरामीलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भए अक्सिजन दिनुपर्छ। बीबीसी